Hedmark [²heːdmɑrk] (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa) waa gobol ku yaal Norway, oo xuduud u leh Trøndelag oo waqooyiga ah, Galbeedka iyo Akershus koonfurta. Maamul goboleedka wuxuu ku yaal Xamar.
Hedmark waxay ka kooban tahay waqooyiga bari ee magaalada Østlandet, qaybta koonfur-bari ee dalka. Waxay leedahay xudduud dheer oo ay la leedahay Iswiidhan, gobolka Dalarna iyo gobolka Värmland. Harooyinka ugu weyn waa Femunden iyo Mjøsa, oo ah harada ugu weyn ee Norway. Qaybo ka mid ah Glomma, oo ah webiga ugu dheer Norwey, ayaa u dhexeeysa Hedmark. Geographically ahaan, Hedmark si caadi ah ayaa u qaybsan: Hedemarken, bariga Mjøsa, Østerdalen, waqooyiga Elverum, iyo Glåmdalen, koonfurta Elverum. Hedmark iyo Oppland ayaa ah gobollada Noorway oo aan lahayn xeebta. Hedmark ayaa sidoo kale martigelisay dhacdooyinka qaar ka mid ah Ciyaaraha Olombikada ee 1994kii.
Xamar, Kongsvinger, Elverum iyo Tynset waa magaalooyinka gobolka. Hedmark waa mid ka mid ah meelaha magaalooyinka yar yar ee Noorway; qiyaastii kala bar dadka deggan waxay ku nool yihiin dhulka miyiga ah. Dadku waxay badanaa ku badan yihiin degaanka beeralayda hodanka ah ee isku xira Mjøsa ee koonfur-bari. Meelaha dhaadheer ee gobollada ayaa bixiya wax badan oo ka mid ah geedaha Norway; Hal mar, ayaa calaamaduhu waxay hoos u dhigeen Glomma xeebta laakiin hadda waxay ku qaadeen baabuur iyo tareen.
Degmada Hedmark ee Engerdal waxay leedahay kala soocista xuduudda koonfureed ee hadda ku taal Norway ee Sápmi, gobolka dhaqanka ee dadka Sami.
Gobolka ayaa u qaybsan saddex degmo oo dhaqameed. Kuwani waa Hedmarken, Østerdalen iyo Solør (Odalen iyo Vinger).
Hedmark wuxuu markii hore ahaa qeyb ka mid ah Akershus ballaadhan, laakiin 1757 Oplandenes amt waa laga soocay. Sannado ka dib, 1781-kii, tani waxa loo qaybiyay Kristians-ka (imika Oppland) iyo Hedemarkens amt. Ilaa 1919, gobolka waxaa loo yaqaan 'Hedemarkens amt'.
Template:Country data Lithuania 1,119
Template:Country data Bosnia-Herzegovina 539
Template:Country data Kosovo 416
Template:Country data Philippines 369
↑ . ssb.no https://web.archive.org/web/20150702101705/https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=FolkInnvkatLand&nvl=&PLanguage=1&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=befolkning&KortNavnWeb=innvbef&StatVariant=&checked=true. Waxaa laga kaydiyay the original 2 July 2015. Soo qaatay 26 June 2017. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hedmark&oldid=223627"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Nofeembar 2021, marka ee eheed 21:58.